I-China Brewhouse system imishini yokusebenza kanye nabakhiqizi | UPijiang
Imishini yesistimu yeBrewhouse
Kuzoba umthamo we-brews onquma ukukhipha ubhiya. Ngokubhekela ukusebenza kahle kokukhiqizwa nesilinganiso ukukhetha inhlanganisela ehlukile.
Uhlelo lokwakhiwa kabusha lungahlanganiswa nemikhumbi emibili, emibili-yemikhumbi ne-HWT, yemikhumbi emithathu kanye nowokwakhiwa kwemikhumbi emine.
Ngamahhotela, ekhaya noma i-dinning, sebenzisa le mikhumbi emibili eyisebenzisayo.Ukuphisa okushibhile okuncane kungakukhetha i-thress-shipping.Umthamo mkhulu, izikejana ziningi futhi ukusebenza kahle kuphezulu.
Uhlelo lokwakhiwa kwezindlu lusebenza kakhulu, kulula ukulusebenzisa futhi kulula ukulifunda ngenxa yomklamo walo onengqondo.Imishini enkulu iqukethe i-mash tun, ithangi lokuhambisa, iketela elibilayo, ithangi le-whirlpool, kanye nemvubelo engeza ithangi / ipuleti yokushisa ukushisa. Zonke izinto ezinkulu ezingamathani ezingamathani zisebenzisa izindinganiso zekhwalithi yamazwe onke zensimbi engenasici 304, kanti ngaphakathi yamukela inqubo kaMiller yeplate eyenzelwe ukufeza ukufudumeza okuphezulu, kanti impahla esetshenziswa ngo-80-100mm polyurethane isetshenziselwa ukufakelwa okushisayo ukuvimba ngempumelelo ukuvuza kokushisa. amandla ethangini.
Indlela yokushisa, ungakhetha ukushisa komusi, ukufudumeza kukagesi, ne-aslo kungacaciswa.
I-Mash / Brew kettle / whirlpool tank + Lauter tun "
"Izimboni Esebenzayo: Ihhotela / Ikhaya / Dinning
Amabhola / usuku: 2
Indawo eyi-1.Small embozwe imishini
2. Ukutshala imali ephansi
3. Ukusebenza okulula
Isilinganiso sokusetshenziswa kwemishini engu-4
I-Mash / lauter tun + I-Brew kettle / whirlpool tank + Ithangi lotshwala obushisayo "
"Izimboni Ezisebenzayo: Ibha / i-Pub
Amabhola / usuku: 3
Ukukhishwa okuphezulu, ukusebenza kahle okuphezulu
Kuhlanganisiwe Imikhumbi engu-3:
I-1.Mash / lauter tun + brew kettle + whirlpool tank
I-2.Mash tun + lauter tank + i-burwkettle / ithangi le-whirlpool
3.Mash / burwkettle + lauter tun + whirlpool tank "
Izimboni Esebenzayo: Uhanjiswa ngemikhiqizo emincane
Amabhola / usuku: 4
1. Okuhlukile kuhlangene, kungangeza ithangi emikhunjini emine
2. Ama-brews amaningi, ukusebenza kahle kakhulu
3. Encane ekuphakameni kwemishini "
I-Mash tank + lauter tun + burw kettle + whirlpool tank
Izimboni Ezisebenzayo: Ufutho omkhulu
Amabhola / usuku: 6
1.Akulungele ukwenziwa kwe-batch ubhiya
2. Umugqa Wokukhiqiza, Izinga eliphakeme lokusetshenziswa kwemishini
3.Iziphuzo eziningi, ukusebenza kahle kakhulu
4. Faka ithangi lesilondolozi, ukuthuthukisa ukusebenza kahle nokunciphisa isikhathi. "
304 imishini yokusabalalisa ubhiya okwenziwa insimbi engagqwali ...
Imishini yokuphisa ubhiya ka-2000l ...
I-500L-10000L yokudlela encane yamabheshu amancane abilayo
3 izikebhe kagesi / umusi ofudumele
umshini wokushisa ophuzo olushisayo wethangi lotshwala…
Izinga eliphakeme lezentengiselwano eBheja laseChina eliphakeme laseChina ...